Unxenxa amavoti umculi wokholo | News24
Unxenxa amavoti umculi wokholo
PHOTO: supplieduMnuz Sibonelo Zaca
UQOKELWE kowezindondo owaziwa ngama Live Your dreams umculi wokholo uMnuz Sibonelo Zaca, nazobanjelwa eDurban Playhouse ngomhlaka 24 kwephezulu (November).
Lo wokholo uqokwe kumkhakha we- Best Upcoming Artist ngengoma yakhe ethi Hambanami.
UMnuz Zaca owakhiphe icwewe lakhe lokuqala ngoMeyi kuwona lonyaka eliqukethe izingoma eziwu-10 uveze ukuthi aukho okumjabulisayo njengokuthi sezike zidlalwe emcimbini ehlukene okubalwa kuzo namasonto.
Lo mculi oneminyaka ewu-25, odabuka endaweni yaseBulwer, eMnyamaneni uthe waqala ukucula ngonyaka ka 2008 kanye neqembu elibizwa ngokuthi i-Stars of God elalakhiwe ngabesilisa abayisishagalombili. “Ngaqala ukubona ukuthi ngiyakwazi ukucula ngesikhathi ngiphiwa ithuba esontweni futhi ngangabe ngisabheka emuva kodwa ngaqhubeka ngaze ngafinyelela lana,” kusho yena.
Eqhuba uthe uyaqala ngqa ukungenela umncintiswano futhi uyathandaza ukuthi ithathwe nguye lendondo.
“Nginesifiso sokuthi ngb nestudio sami, okulapho ngizosiza abantu abasebasha ngokuba phrojusela izingoma zabo,” kubeka yena.
Ukuze awine lomculi unxusa umphakathi womkhandlu waseHarry Gwala ukuthi umvotele khona ezobuya nayo lendondo. “Ukuze ngibuye nayo ekhaya lendondo ngicela umphakathi wakithi ukuthi ungivotele,” kunxenxa lomculi.
Abafisa ukubona lu mculi ebuya nayo lendondo bangathumela iSMS : LYD 123 to 45633.i